ဘဝမှတ်တိုင်: December 2016
Virus တွေကြောက်ကြောက်နေသူများအတွက် Virus ကာကွယ်မယ့် -Antivirus Guard Version 1.0.0 APK
Android ဖုန်းကို အသုံးပြုထားသူများအတွက် malware and security ပိုင်မှာ အရမ်းကောင်းတယ်။ ဒီကောင်လေးကတော့ ဖုန်းထဲမှာ ထည့်ထားတာနဲ့ Viruses and security risks ကို auto အလုပ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိဖုန်း၏ Viruses နှင့် security ပိုင်မှာ ပိုပြီး အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ အရမ်းကောင်းတယ် Application ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုမယ်သူများအတွက် Android OS 2.5 အထက်ရှိဖုန်းများ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဖိုင့်ဆိုဒ်ကတော့ 5.1 MB ရှိပါတယ်။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/15/2016 10:18:00 pm0comments
♪ ဖုန်းထဲမှာပြောဆိုသမျှတွေကို Recording ဖမ်းယူထားပေးမယ့် - Call Recorder – ACR v20.0 Apk (Dec-6) ♫
ဖုန်းပြောနေချိန်မှာ ပြောဆိုသမျှအကြောင်းအရာတွေကို မှတ်တမ်းယူပြီး အသံဖိုင်အဖြစ်သိမ်းဆည်းထားပေး မယ့် Call Recorder – ACR ဆိုတဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Application လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Call Recorder apk တွေကတော့ အများကြီးရှိပါတယ်။ အခုလည်းအဆင်ပြေလွယ်ကူမယ့် Apk လေးတစ်ခုဖြစ်ပါ တယ်ဗျာ။ လုပ်ဆောင်ချက်အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်မှာဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အောက်က Link ကနေပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Search- Grouping recordings by date
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/13/2016 10:44:00 pm0comments
ဖုန်းကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ ပေါ့ပါးစေမယ်-1Tap Cleaner Pro v2.88 APK
Android ဖုန်းကိုင်းဆောင်းသူများအတွက် One Click နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ ပေါ့ပါးသွားစေမယ် 1Tap Cleaner Pro Updated လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အကိုအမတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ အမြဲဆောင်ထားသင့်တဲ့
application လေးတစ်ခုပါ။နောက်ပြီး ဖုန်းဂိမ်းတွေဆော့နေတဲ့ ဘော်ဒါတို့ အဓိကဆောင်းထားသင့်ပါတယ်။ဒီ application လေးကခလုတ်တစ် ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ Cache, History နှင့် Call /Text Log များကိုလည်းရှင်းလင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Android ဖုန်း / Tablet ဖုန်းတွေမှာ ရှိထားသင့်တဲ့ application ကောင်းလေးတစ်ခုပေ့ါဗျာ။ ဒီကောင်လေးကတော့ ဖိုင်းဆိုဒ်4.01MBဖြစ်ပြီး ဖုန်းအားလုံးမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ Screen Shot တွေနဲ့ရိုတ်ပြပေးထားပါတယ် လိုအပ်တယ်
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/13/2016 10:41:00 pm0comments
♪ Smadav v11.04 Latest Version With 1Click Activator ♫
အပေါ့ပါးဆုံး နောက်ဆုံးထွက် Antivirus.
Smadav 2016 Rev. 11.0.4 released !!
+ Adding new 220 virus database,
+ Improvement in protection to prevent Ransomware (especially Cerber3and Cerber 4),
+ (Rev. 11.0.4) Faster startup and fixed explorer bug,
+ and other enhancements.
2. install "Smadav11.04 Setup.exe"
3.Double-click on "Registaer.reg" and Click "YES"
Post by: WinKabarKyaw
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/13/2016 10:33:00 pm0comments
♪ Smadav v11.04 Latest Version With 1Click Activat...